Réponses: Petites questions Laza Adina Malagasy | Baccalauréat série A-C-D à Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Série C Série D Réponses: Petites questions Laza Adina Malagasy | Baccalauréat série A-C-D à Madagascar
Réponses: Petites questions Laza Adina Malagasy | Baccalauréat série A-C-D à Madagascar
1. Ny tara-kevitra roa iombonan’ny asa soratr’I J.J. RABEARIVELO sy Samuel RATANY:
- Ny alahelo tsy fantam-piaviana, sy sorisorin-tsaina, ny fahatsiarovana sy ny hanina ny “lasa”. Marihina fa samy tao anatin’ny vanim-potoana “Fiforetana anaty” no niainan’izy mirahalahy.
2. Hazavao ao anatin’ny andalana tsy mihoatra ny dimy fa mpiantoka ny velona ny razana:
- Ny razana no aloalon’ny lanitra sy ny tany. Izy no mitondra ny hetaheta sy ny fanirian’ny velona ho any amin’ny Zanahary. Ny razana no mitahy ny velona amin’izay zavatra rehetra aoriny sy zava-drehetra ataony. Tsy azony atao ny manda izany: “Raha razana tsy hitahy mifohaza hihady vomanga”. Ny razana no manome hasina ny andriamanjaka sy ny mpitondra. Ny razana no mpanome taranaka ho an’ny momba sy ny tsy niteraka (fatoriana eo ambony tsihy namadihana). Noho izany miantoka ny velona ny razana.
3. Fenoy amin’ireto teny ireto ny tsanganana araka izay fifandraisany:
Andriamanitra, tsiny, anjara, rariny.
4. Indreto misy fanampin’anarana poeta na mpanoratra. Fenoy ny banga ary mariho raha: poeta, na mpanoratra, na poeta sy mpanoratra.
- Clarisse: Clarisse RATSIFANDRIHAMANANA: Poeta sy mpanoratra
- Georges: Georeges ANDRIAMANANTENA (Rado): Poeta
- Emilson Daniel: Emilson Daniel ANDRIAMALALA: Mpanoratra
- Jean Verdi Salomon: Jean Verdi Salomon RAZANDRAINY (Dox): Poeta
5. Ireo sokajin’olona ialan-tsiny rehefa hikabary na handray fitenenana:
- Ny mpitondra sy ny mpanapaka eo amin’ny tany sy ny fanjakana.
- Ny zokiolona
- Ny Ray aman-dreny
- Ny vehivavy
- Ny mitovy taona sy saranga amin’ny tena
- Ny zandriolona
6. Ohabolana na fomba fitenenana iray avy momba ny marina, ny vintana ary ny tsiny.
Ny Marina: “Teny zato, kabary arivo, fa tokana ihany ny marina”.
Ny Vintana: “Tsy misy tsy mivavaka miatsinanana fa ny harena miandry vintana”.
Ny Tsiny: “Ny tsiny toy ny rivotra ankadilalana, mipaoka vao mahataitra”.
7. Indreto misy lohatenina boky. Lazao avy ny anaran’ny mpanoratra azy:
- Mitaraina ny tany: Andry Andraina
- Sikajin’ny Dadabe: Randriamadanarivo
- Ny fanagasiana: E.D. Andriamalala sy Ralaisaholimanana.
8. Ny angady nananana sy vy nahitana ny Fitsipi-pitenenana Malagasy ara-drafitra: I SIMEON RAJAONA.
9. Ohabolana roa manaporofo fa mibaiko ny fitondrantenan’ny olona ny fahatahorana an’Andriamanitra:
- “Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra antampon’ny loha”.
- “Ny adala no tsy ambakaina, Andriamanitra no atahorana”.
10. Ireo fizarana efatra eo amin’ny tantara raketin’ny boky “Vakivakim-piainana”. Fitanisana ny lohateny tsirairay sy ny fizarana azy ireo:
- Fizarana I: Tsikalakalam-pihavanana
- Fizarana II: Tsikalakalam-pitenenana
- Fizarana III: Tsikalakalam-bola
- Fizarana IV: Tsikalakalan’olona
11. Ny atao hoe “lany tamingana”, ny ny hoe “momba”. Ireo antony maha ratsy azy:
- Antsoina hoe “lany tamingana” ny anaran-dray sy reny tsy misy mpitondra sy mpandimby intsony noho izy reo lany taranaka. “Tamingana” ahitana ny foto-teny hoe “singa” izay midika hoe “iray”. Ny “lany tamingana” noho izany dia midika hoe tsy misy intsony na ny singany aza, tsy misy intsony na dia iray aza.
- “Momba”: ny vehivavy tsy niteraka teo amin’ny Malagasy no antsoina hoe momba.
- Ny maha ratsy ny “lany tamingana” sy ny “momba” dia ny tsy fisian’ny taranaka mandimby. Tsy tanteraka mihitsy ny hoe: “ny hanambadian-kiterahana, ny hiterahan-ko dimby”. Tsy misy arak’izany ny fifampitohizan-taranaka. Tsy misy ny taranaka handova, ny zanaka hirahina, n zanaka hamaly babena, haka volofotsy…
Mangidy amin’ny Malagasy indrindra izany hoe tsy niteraka fa “momba” izany ka ho “lany tamingana”.
12. Ireo faribolana roa ivondronan’ny mpanoratra sy poety misy amin’izao fotoana izao:
a. Faribolana “NY HAVATSA UPEM”
b. Faribolana “SANDRATSA”
13. Antony iray lehibe tsy mampitovy ny tsiny sy ny tody:
- Ny tsiny azo ialana sy sorohina ihany fa ny tody tsy maintsy mihatra na inona na inona atao.
14. Vanim-potoana inona no niantsoana ny teo anelanelan’ny taona:
-1820 ka hatramin’ny 1905: Vanimpotoana Kristianina
-1905 ka hatramin’ny 1915: Vanim-potoana fakan-tahaka
15. Mitsimbina ny aina ny Malagasy ary mitsimbina ny fitohizan’ny aina. Fombam-pitenenana telo manaporofo fa ampahany avy amin’ny tena ny zanaka:
- Silaky ny aina.
- Vahatry ny aina
- Sombin’ny aina.
16. Ny tena anarana marina ao anaty soram-piankohonana entin’ilay poeta na mpanoratra:
- Dox: Jean Verdi Razandrainy
- Rado: Georges Andriamanantena
- Tanicus: Samuel Ratany
- Ilay: Rasalaisaholimanana
17. Tavilahy, Rafiringa, Tsimandresy, Ratsimanohitra, … Nahoana no nampitondraina ireny anarana ireny ny zaza? Noho ny vintana manao ahoana ka mety haninona?
- Mahery vintana ireny zaza ireny. Atahorana hanoto-vintana ny ray aman-dreny sy ny manodidina azy. Noho izany, omena anarana somary manaivaiva, na milaza fanetren-tena.
18. Ny taona nivoahan’ny Abidia Malagasy: 1823
Andro nanjakan’I Radama I
Ankoatra ny soratra Latina, Ny soratra nisy teto Madagasikara: SORABE
Ny nitondra azy: ARABO
19. Milaza ohabolana:
- Roa mikasika ny Aina:
“Lahy tokana ny aina”
“Ny aina Ramangatahiana, ny vola Ramangatadiavina”.
-Roa mikasika ny Tsiny sy ny tody:
“Misoko toa ora-panala ny tsiny, an-koditra vao mahangoly”
“Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina”
-Roa mikasika ny anjara sy ny vintana:
“Aza miady vintana amin’ny akoho, fa raha ho any antsena izy lolohavina”
“Iray tampo samihafa, samy manana ny vintany”.
20. Mila tononkalo roa nosoratan’I Rado.
- Boboka, tia , tsy misy, hafatra, satriko, fitiavana, tsy maty, voninkazo adaladala…